Biko Gbanye Sootu Ebe I Dere | Martech Zone
Anyị na-ele anya mgbe niile maka ihe ndị metụtara ndị na-ege anyị ntị. Ihe ngosi weebụ, nbudata, webinars, pọdkastị, ndebanye ndebanye conference anyị hụrụ n'anya iji nweta okwu ahụ na nke ọ bụla gosipụtara uru. Ihe m na-anọgide na-achọta ugboro ugboro, ọ bụ ezie, bụ isi okwu abụọ na-eme ka o sie ike (ma ọ bụ agaghị ekwe omume) ịkekọrịta ya ọdịda page:
Enweghị bọtịnụ ịkekọrịta - nsogbu mbu m na-achọta bụ enweghị mmekọrịta nkekọrịta mmekọrịta na ibe ọdịda. Ibe ọdịda bụ ebe zuru oke maka ịkekọrịta mmekọrịta! Ọ bụrụ na m na-edebanye aha maka nbudata ma ọ bụ ihe omume, ọ ga-abụ na ọ bụ ihe m chọrọ ịkọrọ na netwọkụ m.
Enweghị mkpado mmekọrịta - mgbe ịkekọrịta njikọ na Facebook ma ọ bụ Google, usoro ahụ na - ewepụta aha, nkọwa na ọbụlagodi onye nnọchi anya na ibe gị. Ọ bụrụ na ị na-akpado peeji nke ọma, ozi a na-akọrọ na-adị oke mma. Ọ bụrụ na ọ bụghị ebe ahụ, ọ na-adọta ozi na ibe nke ezighi ezi.
M ga-ewere na Emecha, sistemụ nke m ji arụ ọrụ ntakịrị oge gara aga. Nke a bụ otu esi eme Omume na-egosipụta mmemme na-abịanụ maka Nna 2.0 Summit (na Machị). Nke a bụ otú previu ga-ele anya na Facebook:
Eventbrite na-ejikọ bọtịnụ ịkekọrịta nke ọma ma jiri ya Meghee Eserese Eserese iji jupụta ozi niile dị mkpa. Agbanyeghị, Eventbrite anaghị ekwe gị setịpụ ihe onyonyo ịchọrọ maka mmemme gị. Kama nke ahụ, ha ji akara ngosi nke ha mejupụta ihe oyiyi ahụ. Ọgbụ!
Ma lee nchapụtụ snippet na Google+:
O bu ihe nwute maka ndi na-ese ihe na ebe nile, Google amaghi igwu egwu na Open Graph Protocol ma kama, choro ihe omuma nke ha na ibe dika akowara na Bọtịnụ Google+ peeji nke (lee ala peeji ahụ na ịhazi snippet ahụ). N'ihi ya, ihe omume Eventbrite na-eyi egwu… na-adọta ihe osise izizi site na ibe na ụfọdụ ederede ederede.
Echere, LinkedIn na-eji teknụzụ mepere emepe, mana m ahụbeghị ya ka ọ na-arụ ọrụ. Ahụrụ m ya ka ọ na-adọta na ezigbo onyonyo mgbe ụfọdụ, yana onyogho ndị ọzọ sitere na saịtị ahụ echekwara ruo mgbe ebighi ebi. LinkedIn na-enye gị ohere idezi aha na nkọwa. Maka ebumnuche ụfọdụ, ọ dị ka ọ bụ naanị dọba aha saịtị ahụ n'agbanyeghị agbanye aha peeji edebere na mkpado eserese na-emeghe.
Otu ndetu ma ọ bụrụ na ị na-eji WordPress iji chepụta ibe ọdịda. Agara m Joost de Valk, onye mepụtara ihe dị ịtụnanya WordPress SEO ngwa mgbakwunye nke ahụ na-agụnye protocol na-emeghe emeghe ma zipụrụ ya ozi dị mkpa iji gbakwunye akara meta meta. Ekwesịrị itinye ha n'ọrụ n'oge na-adịghị anya!